सपनाको सहर ‘मानवीय भावनाको कसीमा पनि हाम्रा सहर पछाडि छन्’Online Khabar Patrika-Online Khabar Patrika isadigital online news Portal for all types of news and information prioritizing Politics, Entertainment and business news
सपनाको सहर ‘मानवीय भावनाको कसीमा पनि हाम्रा सहर पछाडि छन्’
मलाई एकदमै मनपरेको सहर स्विट्जरल्यान्डको ‘जुरिक’ सहर हो । त्यो सहरको जति प्रशंसा गरे पनि पुग्दैनजस्तो लाग्छ मलाई । प्राकृतिक सौन्दर्य, अनुशासित, शान्त र व्यवस्थित भएकै कारण त्यो सहर अरु सहरभन्दा छुट्टै छ । त्यहाँका मानिस निकै अनुशासित छन् । सडक छेउछाउ अस्थायी रेस्टुरेन्ट छन्, तर ती एकदमै व्यवस्थित पाराले चलेका छन् । सहरमा एकले अर्कोलाई कतै पनि अवरोध गरेको देखिन्न । सबै आ–आफ्नै धुनमा हुन्छन् । सायद यस्तो स्वभाव भएका सहरवासी विश्वका सहरमा बिरलै छन् होला ।
यातायातको सुविधा होस् । एकले अर्कोलाई अवरोध नपुर्‍याऊन् । सहरवासीमा मानवीयता र माया पाइयोस् । भौतिक सेवा–सुविधा होऊन् । सहरमा बसेकै कारण हरेक चिजमा सुरक्षित छु भन्ने महसुस होस् ।
विदेशका कुन–कुन सहर घुम्नुभएको छ ?
मैले १८ भन्दा बढी देशका सहर घुमेको छु । जापानको टोकियो, लन्डन, जेनेभा, मस्को, जुरिक, पेरिस, लन्डन, मेलबर्न लगायत धेरै सहर पुगेको छु । यी सहरका आफ्नै विषेशता पाएँ ।
यति धेरै सहर घुम्दा कस्तो महसुस भयो ?
मलाई पहिले अरु देशका सहर पनि हाम्रैजस्ता होलान् भन्ने लाग्थ्यो । पुगेपछि मात्रै थाहा पाएँ, खास सहर त विदेशमा रहेछन् । मैले घुमेका धेरै सहर भौतिक रूपमा अति नै व्यवस्थित थिए । ती सहरको नियम पनि कडा थियो । त्यहाँका सहर स्मार्ट सहरको शैलीमा विकास भइसकेका छन् । त्यहाँका नागरिकको जाँगरले नै ती सहर सजिएका होलान् ।
हाम्रा सहर किन त्यस्तै बन्न सकेनन् जस्तो लाग्छ ?
चाहने हो भने हाम्रा सहर अन्य मुलुकका सहर भन्दा राम्रा र व्यवस्थित बन्छन् । मात्र सरकारको काम गर्ने शैली पारदर्शी नभएर हामी पछि परेका हौँ । प्राकृतिक सुन्दरतालाई हेर्ने हो भने हाम्रा सहर अति नै राम्रा छन् । खालि यहाँको भौतिक पक्ष राम्रो नभएकाले सहर पनि अव्यवस्थित देखिएका हुन् ।
प्राकृतिक हिसाबले विदेशका सहर कस्तो लाग्यो ?
मैले घुमेका ठाउँमध्ये प्राकृतिक रूपमा नेपालजति धनी देश कतै भेटिनँ । विदेशका धेरै सहर बनावटी शैलीकै छन् ।
तपाईंको विचारमा हाम्रा सहरको विकास हुन किन नसकेको होला ?
कुनै पनि सहरको विकासका लागि योजना र चेतनाको खाँचो हुन्छ । यसकै कमीले हामीकहाँ काम हुन सकिरहेको छैन । मौखिक रूपमा गर्छौं भन्ने तर व्यवहारमा नदेखाउने प्रवृत्तिले गर्दा हामीपछि परेका हौँ जस्तो लाग्छ ।
आफू घुमेका विदशी सहर र हाम्रो देशका सहरबीच भिन्नता के पाउनुभयो ?
हिमाल, चिसो हावा, नदीनाला, हरियालीले हामी सम्पन्न छौँ । तर भौतिक विकासका हिसाबले अरु देशका सहर र नेपालमा अति नै फरक छ । मैैले विदेशका र हाम्रो देशका सहरको दुइटा विषयमाथि भिन्नता हेर्ने गरेको छु । ती हुन्, भौतिक र प्राकृतिक विषय । प्राकृतिक रूपमा नेपाललाई कुनै पनि सहरले भेटाउँदैन । यहाँको मौसम अति नै राम्रो छ । भौतिक रूपमा विदेशका सहर हाम्राभन्दा धेरै अघि छन् ।
काठमाडौंका मेयरले स्मार्ट सहर बनाउने घोषणा गरेका थिए, बन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
धेरै मुलुक स्मार्ट सिटीको कन्सेप्ट अनुसार अघि बढेका छन् र स्मार्ट सिटी बनेका पनि छन् । यो कुनै नौलो कुरा होइन तर नेपालको विषयमा यो नयाँ कुरा हो । यहाँका सहरलाई स्मार्ट सिटी बनाउँछु भनेर हुँदैन । पहिला यहाँको भौतिक निर्माणको पक्षलाई बलियो पार्न सक्नुपर्छ।
काठमाडौं सहर कस्तो लाग्छ ?
काठमाडौं मलाई राम्रै लाग्छ । पछिल्लो समय सहरमा मानवीयता, माया र मित्रता हराउँदै गएको छ जस्तो लाग्छ । गाउँमा पाइने माया र व्यवहार सहरमा पाउन सकिएन भने सहरप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो हुन्थ्यो होला ? विकासको हकमा हाम्रा सहर अघि बढे पनि मानवीय भावनाको कसीमा हाम्रा सहर पछि नै छन् । सहरमा मायाको अभाव छ । यदि काठमाडौंका सहरमा फर्पिङ, टोखा, साँखुका गाउँमा जस्तै माया–सद्भाव पाउने भए, घान्दु्रक र घलेगाउँमा पाइने माया पोखरामा पाउने भए, सहरमा बस्न कति जाति हुन्थ्यो होला ।
काठमाडौंको प्रदूषण देख्दा दिक्क लाग्दैन ?
दिक्क लागेर के गर्नु ! आखिर ४० लाख सहरवासीले सहेको कुरा मैले सहन किन सक्दिनँ होला र ? तर सधैँभरि सहर यस्तो देख्न नपरोस् भन्ने लाग्छ । आफ्नो ठाउँ जस्तो भए पनि माया लाग्छ । सरकारी निकायबीच समन्वय हुने हो भने सहरको विकास चाँडै हुन्थ्यो होला ।
विश्वका धेरै चर्चित सहरमा पुगेको छु । तर मनले रोजेको युएसको ‘भेगास’ सहर पुग्न पाएको छैन । मिलेसम्म त्यहाँ पनि छिट्टै पुग्छु ।
काठमाडौंको मनपर्ने र मननपर्ने पक्ष के हो ?
सायद नेपालमा जस्तो सांस्कृतिक सम्पदा, जात्रा अरु कुनै पनि देशमा छैन होला । काठमाडौं सहरमा हरेक दिन एउटा न एउटा पर्व भएकै हुन्छ । जात्रा र पर्व सहरको एक हिस्सा बनेको छ । यहाँको मौलिकता र सांस्कृतिक धरोहरले आज विश्वको ध्यान तानेको छ । मठ–मन्दिर, हिमाल, हरियाली, सांस्कृतिक परम्परा लगायत विषयलाई हेर्दा काठमाडौं रामो लाग्छ । यहाँको नराम्रो लाग्ने पक्ष धुँवाधुलो, ट्राफिक जाम, अव्यवस्थित पार्र्किङ लगायत हुन् ।
सहरवासीको मननपर्ने बानी के हो ?
मलाई सहरवासीको व्यवहार र आचरण मनपर्दैन । हामी आफ्नो मात्रै हेर्छौं तर अरु कुनै वास्ता गर्दैनौँ । आफ्नो गेटबाट फोहोर बाहिर मिल्काएपछि सफा भएँ भन्ने ठान्छौँ, तर त्यसले छिमेकीलाई असर गर्छ भन्ने कुरा वास्तै गर्दैनौँ, सहरवासीको मननपर्ने बानी यही हो ।
पछिल्लोे समय घुमेको सहर कुन हो ?
दुई महिनाअघि मैले जापानको टोकियो सहर घुमेको थिएँ ।
अति नै राम्रो लाग्यो । त्यहाँको भौतिक निर्माण र एकले अर्कालाई गर्ने व्यवहार राम्रो लाग्यो ।
घुमेकामध्ये सबैभन्दा महँगो लागेको सहर कुन हो ?
विदेशका धेरैजसो सहर महँगै छन् । त्यहाँको सुविधा हेर्दा ठीकै पनि हो । अरु देशका सहरभन्दा नेपालका सहर अति नैै सस्तोमा घुम्न पाइन्छ ।
प्रस्तुति : शिवहरि घिमिरे नागरिकबाट
बर्षकै उत्कृष्ट भोजपुरी गायकको अवार्डद्वारा सन्तोष राज सम्मानित